यस्ता छन्, खुट्टा फुट्ने कारण ! (उपचार विधिसहित) – MediaNP
जाडोयाममा खुट्टा फुट्ने समस्यालाई एक सामान्य रुपमा लिइन्छ । यस्तो समस्याबाट अक्सर मानिसहरु पिडित भएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको सुख्खायाम, शरीरमा पानीको कमी हुनु, फंगल इन्फेक्सन, पसिना तथा चिसोको कारण, छाला रोग तथा खराब जुत्ताको प्रयोग गर्नु हो । यस्तो समस्या १० वर्ष भन्दा माथिकालाई मात्र हुन्छ । त्यस्तै धेरैने साबुनको प्रयोग गर्ने, कफीको धेरै पिउने, दैनिक रुपमा सरसफाइ नगर्ने, मोटोपनाको कारण, थाइराइड र मधुमेह पनि हुन् । यस्ता समस्या भएकाको अत्याधिक खुट्टा फुट्ने गर्दछ । खुट्टा फुटेने समस्या कसरी सिर्जना कस्ता लक्षण देखापर्दछन् भन्ने बारेमा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ, जस्तैः छाला डा«इ हुने, चिलाउने, दुख्ने, पहेलो वा छाला रातो हुने । यदि अत्याधिक खुट्टा फुटेमा इन्फेक्सन भई निकै दुखाई हुन्छ । यसलाई केहि सामान्य घरेलु उपाचारबाट सजिलै निको बनाउन सकिन्छ ।
उपचार विधिः १.नरिवलको तेल
नरिवलको तेलको प्रयोगले फंगल इन्फेक्सन तथा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनबाट लड्न निकै मद्दत गर्दछ । किनकि यसमा एन्टीफंगल गुण पाइन्छ । उपचारको लागी खुट्टालाई तातो पानीेले सफा गरी धुनुहोस् र तातो पानीमा करिब १० मिनेट जति डुबाउनुहोस् । यसपछि नरम ढुङ्गाले फुटेको भागमा घोट्नुहोस् । त्यसपछि मस्टराइजर क्रिम वा नरिवलको तेल लगाएर स्क्रब गर्नुहोस् । यो उपाय रातको समयमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक यसो गर्नाले समस्या बिस्तारै कम हुन्छ । तेलको प्रयोग गर्दा जहिले पनि नरिवल वा जैतुनको तेल प्रयोग गर्नुपर्दछ ।२.ग्लिसरीन
ग्लिसरीनमा अत्याधिक मात्रामा मस्टराइजिङ् हुन्छ, जसले फुटेको भाग छिट्टै निको बनाउँछ । ग्लिसरीनलाई कागतीको रसमा समान मात्रामा मिलाएर प्रयोग गर्नपर्दछ । यसमा हल्का गुलाब जलको मिसाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खुट्टा फुटेको ठाउँमा लगाएपछि करिब १० मिनेटपछि सफा पानीले धुनाले समस्या ठिक हुन्छ ।
३. सिरे नुन
सिरे नुनले ब्लड सर्कुलेशन सहि तरिकाले गर्ने काम गर्दछ । यसमा म्याग्नेसियम पाइन्छ, जसले स्किनलाई हेल्दी पनि बनाउँछ । यसलाई फुटेको भागमा लगाउँनाले विषाक्त पदार्थ सजिलै बाहिर जान्छ । यसको प्रयोग डेढ कप तातो पानीमा सिरे नुनु हालेर गर्न सकिन्छ, सिरेननु हालीसकेपछि करिब १० मिनेट जति उक्त पानीमा खुट्टा राख्नुहोस् । यसपश्चात फुटेको भागमा नरम ढुंगाले घोटेर सफा गरी फेरी अर्को यसैगरी बनाएको पानीमा १० मिनेट खुट्टा डुबाउनुहोस् अनि सफा कपडाले पुछेर तेल वा कुनै मस्टाइजर क्रिम लगाउनुहोस् । दैनिक रुपमा यस्तो गर्नाले करिब चार पाच दिनपछि फुटेको भाग निका हुनेछ ।
कागतीमा माइल्ड एसिडिक गुण पाइन्छ, यसले डा«इ स्किनबाट छुटकारा दिई स्किनलाई निकै राम्रो बनाउने काम गर्दछ । तातो पानीमा थारै कागतीको रस मिसाएर खुट्टा करिब १० मिनेट जति डुबाई सफा ब्रसले खुट्टा सफा गरी मस्टाइजर लगाउनाले फुटेको निको हुनेछ । निको बनाउनको लागी भने ४ दिन सम्म यसको प्रयोग गर्न जरुरी छ । यसको साथमा एक चम्चा पेटो«लियम जेलमा एउटा कागतीको रस लगाई सफा गर्न पनि सकिनेछ ।
पाकेको केरामा धेरैनै मस्टराइजर हुन्छ । दुईवटा पाकेको केरालाई मिक्सचरमा पिसेर एक बाक्लो पेष्ट बनाई फुटेको भागमा लगाई करिब १० देखी २० मिनेट सम्म छोडेर तातो पानीले धुनाले निकै फाइदा हुन्छ ।